Torolàlana momba ny Seminera ho an'ny mpangataka: Ahoana no fomba hanakanana ireo tranokala
Ny fanasitranana ny tranonkala dia manampy ireo mpampiasa hamoaka ny angona isan-karazany avy amin'ny tranokala. Amin'izao fotoana izao, raha mampiasa fitaovana mahomby ianao dia afaka maka ny votoaty tianao. Misy programa rindrambaiko maromaro ety anaty aterineto izay manolotra safidy manintona lehibe. Raha ny marina dia manangona be dia be ny fangalarana. Ohatra, afaka mahazo lisitra maro, fifandraisana, mailaka, vokatra ary maro hafa - moisture content drying. Vokany, maro ny orinasa SEO sy e-shops mampiasa io fomba io hanatsarana ny kalitao amin'ny serivisy.
Misy tranonkala tsy mamela ny fanariana. Noho izany dia mila mitandrina tsara ny mpiserasera rehefa mitsidika tranonkala iray mba hividianana votoaty sasany. Ilaina ny mamaky ny fepetra sy ny fepetra isaky ny tranokala mitsidika anao mba hahazoana antoka fa tsy manitsakitsaka lalàna ianao. Raha tsy izany, dia mety hiatrika olana maro ianao, toy ny olana ara-dalàna. Ireo mpikaroka ao amin'ny tranonkala dia mila mahatsiaro fa afaka mampiasa tranonkala ho fitaovana mahomby amin'ny asany izy ireo ary manaisotra votoaty noho ny antony tsara. Azonao atao, ohatra, ny mitady ny vidin'ny vokatra hafa na ny fifandraisana amin'ny mpanjifa mety. Izany dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny tolotr'asa amin'ny fanomezana vokatra avo lenta amin'ny vidiny tsara.
Fandaharanasa Software Python
Azo atao amin'ny alalan'ny fampiasana fiteny samihafa. Ohatra, tranokala dia afaka mampiasa ny programa rindrambaiko Python, fiteny sy fandaminana mipoitra izay manome tolotra mahasoa maro ho an'ireo mpampiasa azy. Raha ny tena marina, fitaovana iray mahavariana ho an'ny mpandray anjara na ireo mpampiasa efa za-draharaha izany. Miaraka amin'i Python, dia mora ny mamoaka ny angon-drakitra ao anatin'ny minitra fotsiny amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo trano famakiam-boky. Azonao atao, ohatra, ny mampiasa tsara tarehy tsara tarehy, izay fitaovana tsara indrindra hanangonana vaovao avy amin'ny tranonkala.
Ireo mpampiasa mila mijery tranonkala iray amin'ny aterineto dia mila mandefa code HTML mba hamakafaka azy io any aoriana. HTML dia fango iray izay ahitana ny fampahalalana rehetra mety hilain'ny mpampiasa iray. Vokatr'izany, ny fampahalalana ilaina, toy ny lisitry ny lahatahiry na ny vidiny, dia azo raisina amin'ny fandinihana ity code ity. Ireo mpikaroka ao amin'ny tranonkala dia afaka mampiasa tranomboky sasany, toy ny Scrapy na Supreme Beautiful, mba hizaha ny code HTML ary hahazo ny angona ilaina ao anatin'ny segondra. Nefa ahoana no ahafahanao manadihady ny code HTML? Voalohany, mila manamarina ianao na tsia ny adiresy HTML anao ary manamarina ny lohatenin'ny pejy. Afaka mandroso ianao amin'ny fanangonana ny fampahalalana manokana rehetra ato amin'ity pejy ity. Mba hahombiazanao dia mila mandinika ny rafitry ny code HTML ianao. Ataovy izany amin'ny fampiasana ny Chrome Inspector.